Wararkii Ugu Dambeeyay Dalka Afghanistan Oo Ay Daliban Qarka U Saaran Inay Qabsato Caasimadda Kabul – somalilandtoday.com
Wararkii Ugu Dambeeyay Dalka Afghanistan Oo Ay Daliban Qarka U Saaran Inay Qabsato Caasimadda Kabul
Ururka Taalibaan ayaa u qarka u saaran inuu dib ula wareego gacan ku haynta waddanka Afgaanistaan, xilli magaalada caasimadda ah ee Kabul ay haatan tahay magaalada kaliya ee wayn ee ay dowladdu maamusho.
Qabshada Jalalabad iyadoon wax dagaal ah uusan ka dhicin ayaa waxa ay magaalada caasimadda ah ee Kabul ka dhigaysaa magaalada kaliya ee wayn ee ay weli dowladdu gacanta ku hayso.
Waxa ay daba socotay markii Sabtidii ay ciidammada dowladda kala wareegeen magaalada waqooyiga ku taal ee Mazar-i-Sharif.
Burburka degdega ah ee ku yimid ciidammada dowladda ayaa waxa uu madaxweyne Ashraf Ghani dul dhigay cadaadis sii kordhaya oo ku aaddan inuu xilka banneeyo.
Waxa uu wajahayaa laba daran mid dooro oo ah inuu isdhiibo ama uu dagaal galo si uu caasimadda u sii haysto.
Dhanka kale Mareykanka ayaa sheegay inuu 5,000 oo askari uu dirayo dalkaasi si ay gacan uga gaystaan daadguraynta muwaadiniinta dalkiisa si loogaga soo saaro dalkaasi ay colaaduhu la dageen.
Madaxweyne Joe Biden oo wajahaya dhaleecayn xooggan oo ku aaddan amarkii ay ciidammada Mareykanka uga soo baxeen waddanka Afgaanistaan, ayaa sheegay inuusan qiil u helayn in “Mareykanku uu abid bartamaha kaga jiro colaad sokeeye oo dal kale ka taagan.”
Bayaan qoraal ah ayuu Mr Biden ku sheegay in xitaa haddii 5 sanadood oo kale ay sii joogi lahaayeen ciidammadu aanay waxba isbadeli lahayn haddii milateriga Afgaanistaan uusan dalkiisa haysan karayn.